Dooro rugta daryeelka caafimaadka - 1177 Vårdguiden
Waxa jiri kara sababo kala duwan in la doorto rug caafimaad ama qaabilaada dhakhtarka oo cayiman. Waxa aad tusaale ahaan dooran kartaa inaad tagto mid u dhow guriga ama shaqada ama leh shaqaale ku hadla ama warbixin ku haya luqad aad fahmayso.
Maxaan dooran karaa?
Waxad adigu dooran kartaa
rugta caafimaadka caruurta
rugta xanaanada hooyada
rugta qaabilaada dhalinyarada
qaabilaada daryeel caafimaad takhasus leh oo furan, tusaale ahaan rugta maqaarka.
Marka aad u baahantahay daryeel caafimaad takhasus leh oo furan waxa mararka qaarkood aad u baahan kartaa warqada dhakhtarka ee u gudbinta. Tani waxa go'aamiya qawaaniinta u gudbinta ee maamulka caafimaadka gobolka ama gobolka aad ka diiwaan-gashantahay iyo meesha aad doonaysid inaad daryeel caafimaad ka raadsato. Wixi dheeraad ah ee ku saabsan sida ay tani uga shaqayso maamulada gobolada ee caafimaadka iyo gobolada kala duwan, halkan ka akhriso.
Dooro rug caafimaad
Marka aad xanuusanayso ama leedahay nooc dhibaato ah waxa aad mar kastaba daryeel caafimaad ka raadsan kartaa rug caafimaad. Halkaasi waxad ka heli kartaa daryeel toos ah oo haddii aad u baahantahay daryeel caafimaad takhasus leh waa in laguu gudbiyaa rugta noocan ah ee saxda ah. Adiga ayaa dooran kara rugta caafimaad ee aad doonaysid, iyadoo aan loo eegayn haddii ay ku taalo maamulka gobolka ee caafimaadka ama gobolka aad ka diiwaan-gashantahay ama meel kale. Tani waxay khuseysaa dhamaan rugaha caafimaadka ee ay socodsiiyaan maamul caafimaad oo gobo ama gobol iyo rugaha caafimaad ee gaarka loo leeyahay kuwooda heshiis la leh maamulka gobolka ee caafimaadka ama gobolka.
Waxa kale oo aad dooran kartaa rug caafimaad oo gaar ah, tani waxa mararka qaarkood lagu magacaabaa in la isku qoro rug caafimaad. Maamulada gobolada ee caafimaadka qaarkood waxa si otomaatig ah loo dooraa rugta caafimaadka ee kuugu dhow haddii aanad adigu si fir-fircoon u dooran mid kale. Haddii aanad ku qanacsanayn rugta caafimaad ee aad dooratay ama doonaysid inaad sabab kale u baddeshid, waad samayn kartaa sidan. Waxa aad dooran kartaa inaad isku qortid rug caafimaad oo ku taala meel kasta oo ka mid ah gudaha Iswiidhan. Xitaa haddii aad ku qorantahay rug caafimaad waxad fursad u haysataa in aad daryeel caafimaad ka raadsato mid kale.
Xiriirka dhakhtar magacaaban
Waxad haysataa fursada ah in la helo la xiriirka dhakhtar magacaaban oo jooga rugta caafimaadka. Xiriirka dhakhtar magacaaban oo jooga rug caafimaad micnaheedu waa in aad la kulmayso dhakhtar keliya xilliga booqasho kasta oo ah dhinaca rugta caafimaadka, waa ilaa inta ay suurtagal tahay.
Dooro daryeelka caafimaadka takhasuska ee furan
Daryeelka caafimaadka takhasuska ee furan waa daryeel caafimaad kaas oo aad heli karto iyadoo aanad u baahanayn in lagu dhigo isbitaal. Waxa ay tusaale ahaan noqon kartaa rugta maqaarka ama rugta indhaha. Haddii aad leedahay nooc cudur gaar ah waxa aad xitaa toos ula xiriiri kartaa rugta takhasuska u leh cudurkaaga, tusaale ahaan rugta keliyaha.
Waxa aad dooran kartaa inaad daryeel caafimaad ka raadsato daryeelka caafimaadka takhasuska ee furan meeshi aad doonayso gudaha Iswiidhan. Mararka qaarkood waxa loo baahanyahay warqada dhakhtarka ee gudbinta, tani waxay ku xidhantahay haddii maamulka caafimaadka gobolka ama gobolka aad ka diiwaan-gashantahay keeno shuruud ah warqada dhakhtarka ee gudbinta si loo yimaado daryeelka caafimaadka takhasuska ee furan iyo haddii maamulka caafimaadka ee gobolka ama gobolka ku qaabilayaa ay leeyihiin shuruudo soo gudbin oo noocaas ah.
Maxaa ku dhacaya diiwaankayga?
Haddii aad doorato rug caafimaad oo cusub ama qaabilaada daryeelka caafimaad ee takhasuska ah markaasi shaqaalaha halkaas jooga si otomaatig ah uma arki karaan diiwaanadaadi ku jiray daryeel bixiyahaagi hore. Haddii aad doonaysid in rugtaada cusubi ay qayb ahaan u heli karaan diiwaanadaadi hore waa in adigu aad ansaxisid arrintan. Shaqaalaha kala hadal sida ay arrintani u dhacdo.
Ma u baahanahay warqada dhakhtarku qoro ee gudbinta ah?
Warqada dhakhtar qoro ee u gudbinta isbitaal ama daryeel gaar ah waa fariin wadata warbixin ku saabsan in adigu bukaan socod ahaan aad u baahantahay qiimeyn gaar ah, baaritaan ama daryeel. Warqada u gudbinta waxa ku jira oo intaasi sii dheer warbixin caafimaad oo ku saabsan tusaale ahaan waxa qofku leeyahay ee calaamado ah, sida qofka caafimaadkiisu yahay iyo cuduro iyo dhaawacyo hore.
Si loo helo warqad dhakhtarku qoro ee gudbinta waa in marka hore aad daryeel ka raadsato rug caafimaad. Haddii aad u baahantahay helitaanka daryeelka caafimaadka takhasuska ee furan waxa dhakhtarka rugta caafimaadka u gudbin u dirayaa rugta aad doonaysid inaad tagto. Qaar ka mid ah maamulada gobolka ee caafimaadka iyo gobolada waxay mar kasta shuruud ka dhigaan warqad u gudbin si aad u hesho daryeelka caafimaadka takhasuska ee furan. Balse maamulada gobolka ee caafimaadka iyo gobolo qaarkood mal aha shuruud noocan ah. Haddii aad haysato warqad gudbin ah waxa mararka qaarkood dhakhso noqon karta inaad daryeel caafimaad ka hesho qaabilaada daryeelka caafimaad ee takhasuska ah. Dhakhsaha aad u helayso daryeel caafimaad waxay ku xidhantahay baahidaada caafimaad.
Haddii aad doonaysid inaad daryeel caafimaad ka raadsato qaabilaada daryeelka caafimaad ee takhasuska ah oo ku yaala maamulka gobolka ee caafimaadka ama gobol aan ahayn halkaad ka diiwaan-gashantahay waa inaad marka hore soo ogaatid haddii gobolka aad degantahay shuruud ka dhigayo in la haysto warqada dhakhtarka ee gudbinta. Waxa kale oo ay ahaan kartaa in maamulka caafimaadka ee gobolka aad doonaysid inaad ka raadsato daryeel caafimaad ay shuruud u tahay warqada dhakhtarka ee gudbinta. Xaaladaha noocaas ah waa khasab inaad tani haysato. Halkan ayaad ka akhrisan kartaa dheeraad ku saabsan sida ay uga shaqayso maamulada gobolada ee caafimaadka iyo gobolada kala duwan.
Ma shaqaynayaa damaanad qaadka daryeelka caafimaad?
Damaanad qaadida daryeelka caafimaad micnihiisu waa in adigu aad daryeel caafimaad ku hesho wakhti go'an gudihiis iyo inaad hesho caawimaada in la tago meel kale haddii gobolka la hoyga kuu ah aanu ku siin karin daryeel caafimaad wakhtigaas go'an gudihiis. Tani waxay shaqaynaysaa oo keliya marka aad daryeel caafimaad ka raadsato maamulka caafimaadka gobolka ama gobolka aad adigu ka diiwaan-gashantahay, ama rug maamulka caafimaadka ee gobolkaagu la leeyahay heshiis.
Marka aad daryeel caafimaad ka raadsato maamulka caafimaadka ee gobol ama gobol kale waa baahiyahaaga dawo waxa go'aaminaya dhakhsaha aad ku helayso daryeel caafimaad. Waa dhakhtarka waxa samaynaya qiimeyntan.
Kharashyada bukaan socodka iyo kharashyada safarada
Kharashyada bukaan socodka way kala duwanaan karaan dhinaca maamulada caafimaadka ee gobolka iyo gobolada kala duwan iyo dhinaca noocyada kala duwan ee daryeelka caafimaad. Haddii aad daryeel caafimaad ka raadsato maamulka caafimaadka ee gobol kale waa inaad bixisaa kharashka bukaan socodka ee ka shaqeeya gobolkaas ay rugtu ku taalo.
Haddii aad doorato inaad daryeel caafimaad ka raadsato meel ka baxsan gobolkaaga, xaq uma lihid inaad hesho magdhow ah safarkan tegida iyo ka imaatinka rugtan, waxa loogu yeedho safarka bukaanka.